Blaogin'i leboda | Janoary 2009
[ Kolontsaina ] 18 Janoary, 2009 07:19:: Voavaky in- (1235)
Dia misaotra betsaka amin'ny namana nandray anjara amin'ny ady hevitra.
Tonga teto ny mpanjanaka dia nanao zay ho afany nametraka ny kolontsainy. Dia niditra koa ny fivavahana ary niezaka nametraka izay ho afany.
Misy lafiny tsara sy ratsy anefa ny fiantraikan'ireo kolontsaina sy fombafomba ireo.
Ny lafiny ratsy no tena misongadina ary mbola mikiky ny tsirairay eto amintsika.
Ny kolontsaina frantsay ary no itondran-tsika ohatra amin'izany lafiny ratsy izany. Eo amin'ny resaka politika dia io iarahantsika mahita io no sisa navelan'izany lafiny ratsy izany. Fitiavan-tena sy fitiavan-tseza no tena mibahana. Tsy firy ireo mpanao politika manana hevitra tena mifototra amin'izay fampandrosoana na farafaharatsiny mitondra ny tena ady hevitra fototra politika izany fa resaka fanenjehana sy fanaratsiana no mibahana. Tsy manana hevitra fototra mikasika ny tena lalana na soridalana entina hampandroso. Amin'izao fotoana izao dia voaporofo izany satria tsy afaka miray hevitra na handrafitra tetikady mazava atolotra ny vahoaka mba hivoahana amin'ny fahoriana sy fahasahiranana lazaina fa iveloman'ny malagasy.
Tsapan'ny vahoaka sahady fa fitadiavana seza aloha vao ny vahoaka e! Miady ho lohany fotsiny fa tsy afaka mandroso hevitra mazava fa mihodikodina sy mienikenika ampitoerana eo fotsiny. Miandry kendry tohana fotsiny fa tsy misy manana hevitra tena mazava. Rehefa tonga eo hita indray e fa tohano aloha. Izay foana ny tantara nisy teto amintsika.
Eo amin'ny sehatra fikarohana sy toekarena dia atao sakana lehibe ny tsy fisian'ny enti-manana sy ny tsy fahampian'ny fitaovana.
Ny amin'ny resaka fivavahana indray dia ny fisaratsarahana sy ny fitsikerana ny hafa finoana no asesika ary vesaran'ny ohatra mifanohitra amin'ny tena voalazan'ny soratra masina.
Tsy mampaninona izany hoe kristianina mifampitory sy mifanaratsy ao amin'ny filazam-baovao sy ny fitsarana izany. Tsy misy henatra ary tsy mandratra ny sofina mihitsy izany hoe : Pretra manana rafozana sy zaodahy na zaobavy ; Pasitera manana vady kely, sns....
Inona ary no mbola sisa maha-malagasy?
Mbola ao io e! Jereo anie ireny vehivavy malagasy miankanjo fohy sy manao itony pataloha milatsaka ny tepany na manao ity akanjo mampiseho foitra ireny. Sahirana mampisondrotra ilay pataloha, mampidina ity zipo fohy na ilay akanjo ambony. Satria ao anaty ao misy zavatra tsy manaiky.
Fatra-panaja sy manana henatra ny tena malagasy. Manana faharetana amin'izay atao. Manana hambo-po sy fitiava-tanindrazana lalina. Mitandro ilay fihavanana, aina ifandrohizan'ny mpiara-belona. Mbola misy mivelona ilay fiaraha-mientana sy firaisankina ka mahavita manangana sy manorina amin'izay eo ampelatanany.
Raha tena resy lahatra ny mpiara-monina dia mahavita mamindra tendrombohitra mihitsy. Amin'iny Distrikan'i Betroka iny dia misy fokonolona nahafoy trano atao lakilasy ianaran'ny zanak'izy ireo. Efa manorina sekoly lehibe amin'ny herin'ny tenany ary niaraka nanapa-kevitra fa hosaziana tsy ho mpiara-monina izay mbola tsy mampiditra ny zanany an-tsekoly.
Misy koa amin'iny Distrikan'i Beloha Androy iny sahy manasazy izay ray aman-dreny mampijanona ny zanany vavy amin'ny fianarany fa misy lehilahy hampakatra vady azy nefa mbola ao amin'ny ambaratonga voalohany.
Fehiny, ario daholo ireo lafiny ratsy amin'ny kolontsaina frantsay nifikiran-tsika sy ny fanaovana fefy sy fialofana ny fivavahana ka tsy tena mivelona izay inoana marina ary tadiavo sy karohy ireo soa toavina tena malagasy fa hery ahafahana miala amin'izao fahantrana izao.
Nahoana ireo sinoa, japoney, vietinamianina ary ireo firenena izay misongadina amin'izao ireo no tafavoaka? Satria niantehitra marina amin'ireo vahoakany izy ireo. Mbola iveloman'izy ireo ny kolontsainy sy ny finoany ary tsy mahamenatra azy ireo izany.
Hatreto indray aloha ary fa dia misaotra mialoha amin'izay hitondra hevitra ahafahan-tsika mandalina foana hatrany
Leboda ihany e!
(2) Hametraka hevitra (0) Verindrohy (trackback) Rohy maharitra